Ukuhonjiswa komtshato ekhaya-Olona luvo lubalaseleyo lokonwabela | IBezzia
USusana godoy | 22/07/2021 14:00 | Ukuhlaziywa ukuba 22/07/2021 14:02 | Ukuhonjiswa
Ngaba uyatshata kodwa ufuna ukukwenza ngendlela esondeleyo? Emva koko unokwenza ifayile ye- umhlobiso womtshato ekhaya eqinisekileyo ukuba yenye yezona zimvo zibalaseleyo. Kuba iya kuba yindawo okuyo, unokonwabela ezona zimvo zibalaseleyo kwaye, ukonga imali eninzi, ehlala iindaba ezimnandi.
Kodwa kuba ixabiso eliphantsi akufuneki ukuba libe lilula ngakumbi, kude nayo. Kwakhona ekhaya ungabheja kwi umtshato wamaphupha, Kufuneka ubheje kwimibono ethile yoyilo. Uqinisekile ukuba usuku lwakho lolona lubalulekileyo ebomini bakho bonke, njengoko kufanele ukuba njalo.
1 Ukuhonjiswa komtshato wasekhaya amalungiselelo eentyatyambo
2 Izitulo kunye nokuhonjiswa kwazo
3 Ungaze ulibale iifoto!
4 Ibha yomthi
5 Ukubheja kwisitayile sendalo kunye ne-rustic
6 Imigca yeglobhu yokukhanyisa ukukhanyisa umzuzu wakho omkhulu
Ukuhonjiswa komtshato wasekhaya amalungiselelo eentyatyambo
Akuthandabuzeki amalungiselelo eentyatyambo yenye yezona nkcukacha zibalulekileyo kufuneka sihombise umtshato wethu. Ke, zama ukuba ekungeneni kwegadi okanye kwindawo apho itheko liza kubanjelwa khona, ube nolungiselelo lweentyatyambo kumacala omabini, kwiitafile kwaye unokuhombisa iindawo zodonga. Ewe kunjalo, soloko uzama ukudibanisa imibala kunye neentyatyambo ozithandayo. Iithoni zePastel ziya kuba zezona zilungileyo kuko konke oku, kuba azenzi zitshaje imeko-bume.
Izitulo kunye nokuhonjiswa kwazo
Okomzuzu womsitho, akukho nto injengokuhamba kunye nomhombiso omhle kulowo nalowo kubo. Ungazogquma ngelaphu ngexesha lokubhiyozela umtshato wakho. Kodwa ungabheja ngokubeka izitulo ngaphandle kwezikhuselo kodwa ngeenkcukacha. Ndiyathetha, unako uhombise ngeefoto okanye iibhaluni, njengezitulo zesidlo. Ewe izitulo zomtshakazi nomyeni zinokwenziwa zenziwe zibe nanye kwiileta. Ngaba ayingombono olungileyo lowo?
Ungaze ulibale iifoto!
Iifoto zihlala zihombisa kwaye zisisondeza kwimemori engapheliyo. Unokukhetha ukubeka enye embindini wetafile nganye, ecaleni kweendwendwe zakho. Ukuba unenkumbulo eyahlukileyo, kungcono ukuyibeka ecaleni kweentyatyambo ezisetafileni. Ngokuqinisekileyo xa befika bahlala phantsi, baya kuncuma kamnandi. Ukuba kukho imithi kufutshane, emva koko unokubeka intambo ebhityileyo kwaye uyixhome imifanekiso oyikhethileyo.
Ngomthi singenza nantoni na esiyifunayo. Kuba imalunga no-cukuvula ibar apho iindwendwe zinokuzizisela khona iziselo ezizithandayo. Unako ukubeka iitafile, kunye nokugqiba okufanayo, kunye ne-canapés okanye i-dessert bar. Zizimvo eziwela nakuwo umhombiso kuba undwendwe ngalunye luyonwabele imeko yoqobo engafaniyo neyangaphambili kwaye babe nakho ukuba naloo kona ukuba bazenzele ngokwabo ukuthanda kwabo. Kwimitshato yasekhaya, sinokuqesha inkonzo yokutya okanye sibeke isitayile sasimahla se-buffet.
Ukubheja kwisitayile sendalo kunye ne-rustic
Ukuba sele unemibono malunga nendlela ofuna ukuwuhombisa ngayo umtshato wakho kodwa uswele isitayile, siya kukuxelela ukuba ukugqitywa kwe-rustic nguye othatha ibhaso lokuqala. Kungenxa yendalo yayo kwaye ngenxa yokuba ine izinto zendalo ezinjengeentyatyambo zasendle, imibala emdaka, iintambo Kwaye kunye neeleyisi eziza kunye nokuchukumisa iidiliya esizithandayo kakhulu. Yiyo loo nto imibala ye-beige okanye yesanti kunye nomhlophe zihlala zikhethelwa umsitho onje. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ungasoloko ubheja kwiikeyiki kuba zidibanisa ukwenza imeko yothando ngakumbi, yile nto siyifunayo ngokwenene.
Imigca yeglobhu yokukhanyisa ukukhanyisa umzuzu wakho omkhulu
Awunakucinga ngezibane ezinkulu, kuba ngeebhalbhu uya kuba nazo ngaphezulu ngokwaneleyo. Kungenxa yoko le nto uneminye imitya efanayo oya kuyinika uthinta ubuchule kunye nendalo kwimeko yakho. Ewe kuyinyani ukuba ungabeka indawo ejikeleze igadi ekwabonelela ngokukhanya. Ucinga ntoni ngezi zimvo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhonjiswa komtshato wasekhaya